Eyona Prudential-Isizukulwane sesithathu se-Underch Anchor yoMvelisi kunye neFektri | Ubulumko
Indawo yokugcina umva
I-anchor bolt ingasetyenziselwa ilitye elinzima lendalo ≥15mm, ilitye elithambileyo ≥20mm; ilungele ezinye iibhodi ezidityanisiweyo, iibhodi zesamente zesamente, ubukhulu ≥16mm, ii-comers zeebhodi kunye nokucocwa kweebhodi ezisecaleni.
Zilungele zonke iintlobo zamacwecwe
Izidingo zobukhulu obuphantsi
Uluhlu olukhulu lokunyamezelana kolwakhiwo
Umthamo omkhulu wokuthwala oomatshini
Ukusebenza kakuhle kweenyikima
Uluhlu olubanzi lwamanqaku e-anchor epleyiti
Isiphumo sebhodi yokutshabalalisa
Plate ufakelo 0 izinga Breakage
Uyilo lobunikazi oluchaseneyo, into ekhuselekileyo kwi-100%
Uyilo olwahlukileyo oluchaseneyo lunokudlala ngokufanelekileyo indima yokuthintela ukubuyela umva kunye nokuchasana nokuphucula ukhuseleko. Kwangelo xesha, isiphoso sobunzulu bebholiti yangemva isezantsi, kwaye inqanaba lokhuseleko elibambeleyo liphuculwe.
Uyilo Ukwaleka, ngokukuko ukwandisa ubomi benkonzo
I-Titanium-plated A4 insimbi yentsimbi yangasemva enganyangekiyo iyamelana nokubola kwaye inokusetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo ezinzima kunye nobunzima, ukwandisa ubomi benkonzo ye-fasteners kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwexesha elide lodonga lomkhusane.
Ukufakwa kombane, ukulungeleka ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo, ubuhlobo ngakumbi kwiplate
Eyahlukileyo kufakelo olwenziwayo, ukufakelwa kombane kunefuthe elincinci kwipaneli, inqanaba lomonakalo eliphantsi, kunokukhusela ngcono iphaneli, kwaye inokusetyenziselwa ukufakwa kokuxhoma kweendonga zamakhethini phantsi kweemeko ezahlukeneyo. Ukufakelwa kombane konke kusebenza kakuhle, kulunge kwaye kulunge ngakumbi kulwakhiwo
Igama lomfanekiso: Isilumko-seSithathu seSiseko seAnchor engaphantsi
3 iphrofayili ye-anchor bolt
Inkqubo yangemva yokusika umva we-bolt eyomileyo inokulungisa ngokufanelekileyo iipaneli zodonga lwekhethini. Indlela efihliweyo "yokusika iminqwazi yangaphakathi" ilungele ulwakhiwo olwahlukeneyo ngaphakathi nangaphandle. Yinkqubo eyakhiwe ziintsimbi zangasemva zentsimbi, iialuminium alloy connectors, kunye nezitshixo zentsimbi. . Ngophuhliso loqoqosho lwentlalo kunye nokuphuculwa komgangatho wobomi babantu, iimfuno eziphezulu zibekwa phambili kumgangatho wobume bokuphila, obukhuthaza uphuhliso loshishini lokuhombisa udonga. Ngokusetyenziswa ngokubanzi kwamatye, iibhodi zeceramic, kunye neebhodi zodongwe kwiindonga zamakhethini, iimfuno eziphezulu zibekwa phambili ekusebenzeni kokhuseleko nakwitekhnoloji yokwakha yeendonga zamakhethini.
Inokubonelela ngowona mthwalo mkhulu kwaye iqinisekise ukuba ibhodi ayixhomekekanga kuxinzelelo lwangaphakathi olubangelwa kukukhululwa kwe-bolt yangemva. Kufanelekile ukuba iibhodi ezahlukeneyo 8mm-30mm.
Egqithileyo Amandla okuQinisa okuQinisekisiweyo kwe-Epoxy Adhesive engenisiweyo yeCone Anchor Bolt
Okulandelayo: intsimbi engaphantsi kweankile yeankile engaphantsi kwenkqubo yokulungisa ilitye lenyengane
i-anchor engaphantsi kwesinyithi